xnxx: အောင်မြင်သောပထမဆုံးနေ့အတွက်ရွှေစည်းမျဉ်း ၈ ခု - TELES RELAY
By နေပြည်တော် နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ် သြဂုတ်လ 4, 2020
အောင်မြင်သောပထမဆုံးနေ့အတွက်ရွှေစည်းမျဉ်း ၈ ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
သင်တစ်ကိုယ်ရေနေပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေနေသလား။ ကောင်းတယ်၊ ဒီဆောင်းပါးကသင့်အတွက်ပါ။ အခုသင်ပြောချင်တာကနောင်လာမယ့်ရက်မှာသတ်ချင်ရင်မှတ်စုရေးတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီ။ နွေရာသီတွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့်နေရာ ၁၀ နေရာကိုသင့်အားဖော်ပြပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားနည်းပြရန်ယနေ့သင့်ဆီပြန်လာသည်။ လူလာစီမာရီရော့တီ (Villa des CœursBrisés၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနည်းပြ) ကသင်၏နောက်ရက်ကိုကောင်းစွာသွားနိုင်ရန်အကောင်းဆုံးသောအကြံဥာဏ်များကိုပေးအပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်အနည်းငယ်ယူရမည်။ ငါတို့သိတယ်၊ အမြဲတမ်းစိတ်ဖိစီးမှုရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ရဲ့အကြံပေးမှုကြောင့်မင်းဟာဘုရင် / မိဖုရားလိုထွက်လာလိမ့်မယ်။ သူတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရုံအောက်ကသွားပါ။
ပထမဆုံးရက်စွဲအတွက်သင့်ကိုသင်နှင့်တူသည့် ၀ တ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။ အလွန်အကျွံလုပ်ရန်မလုံလောက်ပါ၊ မှန်သောချိန်ခွင်ကိုရှာဖွေရန်နှင့်သင်၏စရိုက်နှင့်သင်နေ့စဉ်ဘဝ၌ရှိနေသောလူနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ သင်သိပြီးဖြစ်သောနေရာတစ်ခုကိုအကြံပြုရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ အဘယ်ကြောင့် ? ကောင်းပြီ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိပြီးပိုပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ် (အကယ်၍ သင်လွတ်မြောက်လိုပါကအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်များရှိနေသည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်) ။ အဘယ်သူမျှမပိုအလေးအနက်ထား, ဒါကြောင့်လည်းသင်၏ရက်စွဲ: ခေတ်မှီ, ဂီတ, ပျူငှါနွေးထွေးသောသည်သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအနည်းငယ်အရသာပေးပါလိမ့်မယ် ...
အလုပ် (သို့) သင်ခန်းစာတွေပြီးတဲ့နောက် 17-19pm ဒါမှမဟုတ် 18-20pm crénoရွေးချယ်ဖို့သင့်ကိုအကြံပေးလိုပါတယ်။ ဤနည်းဖြင့်အဆင်ပြေလျှင်သင်ရက်စွဲကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်စိတ်ပျက်ခဲ့လျှင်သင်၏ညနေခင်းသည်ဖျက်ဆီးခံရမည်မဟုတ်၊ သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်လည်းတွေ့ဆုံနိုင်သည်။
သင့်ရှေ့မှောက်၌ရှိသောသူအားသင်လုံးဝစိတ်ဝင်စားရန်လိုသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နားထောင်ခြင်းခံစားချက်ဟာအမြဲတမ်းနှစ်သက်စရာကောင်းပေမယ့်လည်းဒီမေးခွန်းဟာသင့်ရဲ့မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေအရတကယ်ပဲဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုလည်းသိစေပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုခုကိုရဲကစားရန်မသတိထားပါ! သို့သော်သူ၏ဘဝ၊ အလုပ်၊ သူ၏ကိလေသာစသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမေးနိုင်သည်။
တစ် ဦး ကပထမ ဦး ဆုံးနေ့စွဲသေချာပေါက်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပါသည်, ငါတို့သိပေမယ့်အနားယူ! သင်စိတ်အေးလက်အေးအနားယူနိုင်လေ၊ မင်းရဲ့နေ့စွဲကိုချွေတာလေလေလေကောင်းလေလေဖြစ်လိမ့်မည်။ စိတ်မပူပါနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ။
ပြီးပြည့်စုံစုံလင်ခြင်းရှိရာမှထိုစဉ်က Diego မရှိပါ ! ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြီးမင်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့သူကိုရှာဖို့ကြိုးစားပါ၊ သင်ရှာနေတာကြာပြီ။
ပထမနေ့ကသူတို့အကြောင်းပြောနေတာထက်ရှက်စရာဘာမှမရှိဘူး။ ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ကိုမေးစရာမေးခွန်းမေးစရာမလိုပါ၊ သို့သော်မဟုတ်လျှင်သင်၏ယခင်ဖြစ်ခဲ့ပုံကိုမသိချင်ပါ။ ထွ = အတိတ်, အပေါ်ကိုရွှေ့! ဘဝကမင်းရှေ့တွင်ရှိနေပြီးနောက်ကွယ်မှမဟုတ်ပါ။
ဖိအားမရှိ။ ကံကြမ္မာကိုယုံပါ၊ အကယ်၍ သင်သည်ဤပုဂ္ဂိုလ်နှင့်သင်၏ဘဝကိုရှင်သန်ရန်လိုအပ်ပါကကြယ်များကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းနိုင်ပြီး၎င်းသည်အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးသည် https://trendy.letudiant.fr/love-et-sexo-8-regles-pour-reussir-un-premier-date-a4962.html တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။